Madaxweyne ku xigeenka Indonesia oo sheegay in Kalluumeysi sharci darro ka socdo Somaliya
09 October, 2019 in Wararka by BANA Mogdishu Office
Madaxweyne ku xigeenka Dalka Indonesia Jusuf Kalla, ayaa sheegay in Biyaha Soomaaliya ay yihiin kuwo gacanta u galay kalluumeysi sharci darro ah islamarkaana dadka Soomaalida ah aysan ka faa'ideysan karin.
Waxaa uu ka hadlayay kulan dhiirro gelin ah oo uu u sameeynayay Kalluumeysatada Dalkiisa oo uu ku yiri ” ka faa’ideysta kheyraadkiinna, haddii aadan ka faa’ideysan Ajaanib ayaa sharci darro ku qaadan doonta sida biyaha Soomaaliya oo kale”.
Jusuf Kalla ayaa sidoo kale sheegay Kalluumeysatada Soomaaliya ay isu rogeen Burcad badeed taasina ay ku qasabtay kaddib markii kheyraadka badahooda ay xoog ku qaateen Ajaanib.
Susi Pudjiastuti oo ah Wasiirka arrimaha Badda ee Dalka Indonesia ayaa sheegtay in Kalluumeysatada Indonesia ay qarka u saaranyihiin in ay noqdaan sida kuwa Soomaaliya oo kale.
Waxaa ay walaac ka muujisay Kalluumeysato Ajannabi ah oo bur buriya Doomaha Kalluumeysatada Indonesia kaddibna kalluunka qaata.
Wasiirad Susi ayaa dowladda ugu baaqday in ay la timaado qorshe cad oo wax looga qabanayo Badaha dalkeeda haddii kalena ay Kalluumeysatada Indonesianka ah isu beddeli doonaan Burcad Badeed sida Soomaaliya oo kale.
Waxaa ay sheegtay in 40 Doomood oo ay leeyihiin Kalluumeysatada Indonesia ay quusiyeen Maraakiibta sharci darrada ah taasina qeyb ka tahay dhibaatada ka jirta biyaha dalka Indonesia.
DF oo Jawaab kulul ka bixisay diidmada M/goboleedyada ee sharciga Batroolka
Madaxweyne Xaaf oo Qoraal Xasaasi ah ah u diray Wakiilada Beesha Caalamka
Madaxweyne Deni oo kasoo horjeestay Xeer ay ansixiyeen labada Aqal ee Baarlamaanka federaalka
Hub la sheegay in Al-Shabaab laga furtay oo Kismaayo lagu soo bandhigay
Madaxweyne Miguel Díaz-Canel oo Telfoon kula soo hadlay Farmaajo iyo Uhuru
Khilaaf Hoose Oo Ka Dhex Qarxay Madaxweyne Farmaajo & RW Kheyre
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo Farriin adag u diray Madaxweyne Farmaajo
Madaxweyne Farmaajo iyo Wafdigii uu horkacayey oo gaaray Magaalada New York
Madaxweyne Farmaajo oo Ahlu Sunna ku bogaadiyay dagaalkii ay la galeen Al-shabab
the background of the new autonomy president Visits: 688750
What 9 World Leaders Were Doing in Their 20s Visits: 43676
Somalia Lost a Career Diplomat, Veteran Politician, Prolific Writer and Pan-Somalist Visits: 38914
Walaalkiisa Dile Oo Maanta Mansab Doon Ah Visits: 34050
54 Sano Kadib Maxaa Keeney In DM Ay Taagnaadaan Meeshii Ay Joogeen 1960 Visits: 28731
Dhaawacyada Injineero Turki ah oo saakay laga qaaday magaalada Muqdisho Visits: 45
Khilaaf ka taagan Cida hogaamineysa Guddiga Doorashada Madaxweynaha Galmudug Visits: 33
Wararkii ugu dambeeyey qarax ka dhacay duleedka Muqdisho Visits: 111
Uhuru Kenyatta oo isku shaandheeyey golihiisa Wasiirada Visits: 104
Saraakiil ka tirsanaa Al-Shabaab oo duqeyn lagu dilay + Magacyada Visits: 108